I-China Manual PVB yokuhlanganisa umugqa wemoto ye-windshield abakhiqizi nabaphakeli | Fuzuan
Izinkambu Zokusebenza: I-Automobile Glass
Uhlobo: I-Assembly Conveyor Yokukhiqizwa Kwe-Lamination.
Ingilazi Iyadingeka: Gobisa ingilazi ye-windshield ene-laminated, ingilazi yangaphakathi nengaphandle.
Inombolo yemodeli: FZPAL-M
Ubukhulu bengilazi: 1.6mm – 6 mm
Isivinini Sokudlulisa Kwengilazi:3-16 m/min
Izinga le-Conveyor: 1100-950±25mm
Ubude Obuphelele: 12m
Ukusetshenziswa: Ama-Conveyors ahlanganisa i-Float Glass ne-PVB ukwenza i-windshield ngenqubo yokukhanyisa.
I-Automotive windshield laminated conveyor, i-PVB assembly line iqukethe ama-conveyor ahlukene anemisebenzi ehlukene.
Isemishi izingcezu ezimbili zengilazi ndawonye bese ubeka ifilimu ye-PVB phakathi. Umswakama we-PVB unethonya ekusebenzeni kwengilazi elaminethiwe. Ukuphakama komswakama, kuncane ukunamathela phakathi kwayo nengilazi, ukwehla komswakama, nokunamathela. Okunamandla, kuyancipha ukumelana nokungena.
Lo mugqa wokuhlanganisa uvame ukufakwa egumbini elihlanzekile lokulawula isimo sezulu lapho izinga lokushisa nomswakama kulawulwa kahle. Uma ubude be-conveyor bubude, umkhiqizo uphezulu. I-conveyor yomhlangano ingafakwa ngokuhambisana nesithando somlilo sangaphambi kokufudumeza / umshini wokukhipha umoya kanye ne-autoclave. Lo mklamo unciphisa ukuphatha ingilazi kubasebenzi abancane kakhulu kuyilapho ukukhiqizwa ngobuningi okuqhubekayo.
Enqubweni yokukhiqizwa kwengilazi ye-windshield ene-laminated, ngemva kokugoba ingilazi kanye nenqubo yokomisa ingilazi, izibuko zangaphakathi nezangaphandle zizohlanganiswa nefilimu ye-PVB ndawonye ngalo mugqa wokuthutha, Hlanganisa i-PVB interlayer phakathi kwezingcezu ezimbili zengilazi, Ukunquma I-PVB Eyeqile. Ifilimu ezungeze i-Glass Edges, Goqa Izindandatho Zerabha Ye-Silicon eduze kwe-Glass Rim.
Izinyathelo Zenqubo Eyinhloko njengoba ngezansi.
● Isiteshi sokuhlola ingilazi.
● Ukubekwa kwamashidi engilazi yangaphakathi.
● PVB interlayer ukubeka-phansi.
● Ukubekwa kwamashidi engilazi yangaphandle.
● Ukuhlanganiswa kwefasitelana elihlanganisiwe.
● Ukususwa kwe-vinyl eyeqile onqenqemeni lwengilazi.
● Inqubo ye-Silicon/Rubber ring
● Amashidi engilazi angaphakathi nangaphandle anesendlalelo se-PVB afakwa ngamabili engxenyeni eyodwa yesistimu ye-DE-airing, i-vacuum ring furnace, ama-nipper rolls noma izikhwama zevacuum, njll.
Lo msebenzi udinga ukwenziwa endaweni ekhethekile, uhlelo oluzimele lwe-air-conditioning luqinisekisa izimo eziqhubekayo ze-thermo-hygrometric zamashidi e-PVB.
Ulayini wokukhiqiza ingilazi yezimoto
Ilayini yokukhiqiza ingilazi ene-laminated
Umugqa wokukhiqiza ingilazi we-windshield yangaphambili
Isivinini se-FZPAL-M: 3-13 m/min (Esingokwezifiso)
Le PVB Assembly Conveyor yakhiwe ikakhulukazi
●Isistimu yokuthutha ibhande lezokuthutha
● Izingxenye ezine zokuthutha ingilazi.
●Amasethi amabili emishini yokugibela ingilazi.
● Uhlelo lokulawula ngogesi.
● Isenzo sokudlulisa ulayini wonke kufanele sihambisane kanye nomshini wokuwasha ingilazi egobile kanye nelayini yokukhipha umoya/isithando somlilo.
● Ukuze usebenzisane nomshini wokuwasha ogobile, ingilazi kufanele idluliselwe indawo eyi-concave ibheke phansi, futhi ukuphakama kwendawo yokusebenza yebhulokhi yokusekela kufanele kuphakame ngokwanele kusukela kumishini ukugwema ukuthintana phakathi kwemishini nengilazi. .
● Ngesikhathi sokusebenza, umugqa wonke kufanele udluliselwe ngokushelelayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingilazi isesimweni esihle futhi ayiguquki.
● Ulayini wonke kufanele ube nezinyathelo zokunqanda ukugqwala ukuze ugweme ukungcolisa igumbi lokuthwebula.
● Ibhulokhi yokudlulisa ethinta ingilazi kufanele ibe bushelelezi futhi ingaklwebhi ingilazi.
● Ukuze kube lula ukusebenza kwefilimu ye-PVB nendandatho yenjoloba/EPDM yesiphephelo somoya noma ifasitela lengilazi yezimoto elaminethiwe, isistimu yokuphakamisa edingekayo ukuze kusebenze kalula ungqimba oluphakathi nendawo kanye nendandatho ye-vacuum.
● Ukuze kuncishiswe inani labantu abasebenzayo ekuphatheni ingilazi mathupha, umshini wokujika wokungeniswa wengezwa endaweni yokubeka i-PVB.
3 Imingcele Yezobuchwepheshe
Ubuncane Bengilazi Usayizi 1000*500 mm
Ukujiya Kwengilazi 1.6mm–6 mm
Ukuphakama kweConveyor 1100-950±25mm (Kwenziwe ngokwezifiso)
Isivinini Sokudluliswa Kwengilazi 3 - 16 m/min (Kwenziwe ngokwezifiso)
Amandla Aphelele 5 KW
Umoya ocindezelwe 1 cbm/ihora, 0.6–0.65Mpm
Isicelo sengilazi Ishidi lengilazi ye-windshield egobile
● Ingilazi idluliswa kancane ngesikhathi sokushintsha phakathi kwamabhande ama-serial conveyors
● Isistimu yokubeka ingilazi.
● Isebenzisa imithi yokwelapha ukugqwala ukuze igweme ukungcolisa igumbi lokulahla.
● Ukuphakamisa isistimu esiteshini sokubeka phezulu se-PVB kanye nesiteshi senqubo ye-vacuum ring, kulula ukuyisebenzisa ngesandla.
● Ulayini ngamunye wokudlulisa ingilazi ufakwe izinzwa, ezikwazi ukubona indawo yengilazi yokulawula.
● Isivinini sokuthutha siyalungiseka, nesiguquli sefrikhwensi.
Okwedlule: Ishubhu yokupholisa yomshini wokuwasha ingilazi egobile
Olandelayo: Imishini ye-lamination ye-PVB ezenzakalelayo yemishini yokugcwalisa i-windshields
Umshini Wokufaka Inkinobho Yesibuko Esingemuva
Isistimu yokulayisha ingilazi yerobhothi Ukuhlukaniswa Kwengilazi ye...
I-automatic PVB umugqa womhlangano womugqa wamawindi laminat...
Ishubhu yokupholisa yomshini wokuwasha ingilazi egobile